मन्त्रालयको छाप, हस्ताक्षर भएको (पहिलो) र बिना छाप हस्ताक्षरको पत्र ।
बसन्त बस्नेत र कल्पना भट्टराई
शुक्रराज अस्पताल (टेकु)का अधिकृत रुपनारायण खतिवडाले आइतबार दिउँसो आत्मविश्वासपूर्ण ढंगले दुईवटा चिठी कोटको खल्तीबाट निकाले, जसमध्ये एउटा चिठी नक्कली हो ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालय झिकाइएको चिठी देखाउन पत्रकारहरूले शनिबार पटक पटक आग्रह गर्दा अस्वीकार गर्ने खतिवडा किन भोलिपल्ट यी दुई–दुईवटा चिठी देखाउन तयार देखिए होलान्, त्यसका लागि तलको यो पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसित कुराकानी गर्न मन्त्रालय डाकिएका डा पुन यस्ता ‘भाग्यमानी’ चिकित्सक हुन्, जोसित कुरा गर्नका लागि तालुकदार मन्त्रालयले चिठी नै काट्नुपर्‍यो । बोलाउँदा नआएको भन्दै उनीमाथि स्पष्टीकरण माग्ने तयारी थियो, मन्त्रालयको । डा. पुनले यो प्रकरण उत्कर्षमा पुग्नुअघि बताएअनुसार मन्त्रालयलाई यसो गर्न उक्साउनेमा केही विशेषज्ञलगायत उपल्लो तहका मानिससमेत थिए ।
तपाईं हामीमध्ये जोकोहीलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहदा एक फोन वा खबर काफी हुन्छ । टेकुबाट सिंहदरबार अघिल्तिर रहेको मन्त्रालय पैदल दूरीमा छ, जहाँ विभागीय प्रमुखको निर्देशन पाएका भरमा डाक्टर उपस्थित हुन सक्छन् । पुनलाई भने चिठी नै गएको थियो ।
पत्र लेखिनु पनि ठूलो विषय नहोला, तर एउटै चलानी नम्बरमा दुईवटा अलग अलग पत्रहरू कसरी लेखिए ? याद रहोस्, पुनलाई मन्त्रालय डाकिएको एउटा पत्रमा उपसचिव प्रमोद सिंखडाको हस्ताक्षर छ । अर्को पत्रमा हस्ताक्षर गायब छ । एउटामा मन्त्रालयको छाप छ, अर्कोमा छाप गायब छ । जबकि चलानी नम्बर भने उही छ ।
पुनले शनिबार पत्रकारसित कुरा गर्दै आफूलाई जिम्मेवारीबाट पछाडि राख्न केही समययता शृंखलाबद्ध चलखेल भइरहेको बताएका थिए । उनका निकटस्थ चिकित्सकहरूले यसलाई पुष्टि गरेका थिए ।
शुक्रराज अस्पताल टेकुका निर्देशक सागर राजभण्डारीले भने मन्त्रालयले पुनसँग स्पष्टीकरण मागेको पुष्टि गरेका थिए । काठमान्डु पोस्टसँग शनिबार कुरा गर्दै राजभण्डारीले भनेका थिए, ‘पुनको कार्यक्षमतालाई लिएर हाम्रो कुनै असन्तुष्टि छैन । तर किन हो, मन्त्रालयका अधिकारीहरु उहाको बारेमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
आइतबार भने उनै पुनले ‘अस्पतालको काममा बाधा नपर्नेगरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन आग्रह भएको’, यो प्रकरणलाई आफूले ‘वृत्ति जीवनको सामान्य प्रक्रियाका रुपमा लिएको’ सफाई दिनु परेको छ ।
आइतबार अपराह्न डाक्टर पुनको वक्तव्य सार्वजनिक भएसँगै सरकार संरक्षित मानिसहरूले मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रचार युद्ध छेडेका छन् । तर थुप्रैले यसलाई रोशनी प्रकरणसँग दाजेर हेरेका छन्, जसमा शक्तिको अधिक चलखेल भएको छ ।
अँ त, उही रोशनी प्रकरण– जसलाइ तपाईंले यति छिटै बिर्सन सक्ने कुरै भएन । यौन दुर्व्यवहार आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराबारे रोशनी शाहीले प्रहरीलाई दिएको जाहेरी, अनि सञ्चारमाध्यमा चुहिएका फोन, म्यासेजहरूका आधारमा महराले सभामुख पद गुमाउनुपर्‍यो, अनि कैद पनि भुक्तान गर्नुपर्‍यो । आखिरीमा प्रमाणलाई काट्न त्योभन्दा ठूला प्रमाणहरू तयार गरिए, जसमा शक्तिको चलखेल थियो । कल्पना गरौं, शक्तिशाली नेताको ठाउँमा आम मानिस हुन्थ्यो भने उसलाई कुनै हालतमा यस्तो छुट मिल्न सक्दैनथ्यो ।
डा. पुनले जे बोलेका थिए, त्यसलाई कान्तिपुरसहित मुख्य अखबारहरूले आइतबारको अंकमा जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गरेका छन् । उनै पुनले मन्त्रीसँग भेटनेबित्तिकै वक्तव्य जुन रुपमा सार्वजनिक भयो, यसले उठाएका प्रश्नहरू स्वभाविक छन् ।
सत्तापक्षका मानिसहरूले २०७६ सालको मितिमा पुनले वक्तव्य जारी गरेको भन्दै उडाइरहँदा यो सोध्न बिर्सेका छन्, मन्त्रालयको एउटै चलानी नम्बरमा कसरी दुई चिठी तयार भए ? त्यो चिठी, जसलाई मन्त्रालयकै अधिकारीले सार्वजनिक गरेका छन् ।
पुनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रालयको तयारीबारे आइतबारका अखबारले पदाधिकारीको भनाईसहित खुलासा गरेसँगै आम आलोचना उत्कर्षमा पुग्यो । पुनलाई कारबाही गरिए संकटका बेला सरकार थप बदनाम हुने विश्लेषणसहित यो प्रकरण बिसाउन आइतबार दिनभर कोसिस भयो । १८ वर्षयता सेवा गर्दै आएको अस्पतालमै उनी रहन पाउने निर्णय यथावत भएसँगै डा. पुन स्पष्टीकरण प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अहोरात्र ड्युटीमा खटिएका पुनसँग एउटै कामका लागि दुई अलग–अलग चिठी देखाएरै भए पनि मन्त्रालयले आम आक्रोश शान्त पार्ने चलाखी गरेको छ ।
यो प्रकरण सेलाएसँगै पुन पूर्ववत् आफ्नो ड्युटीमा फर्केका छन् । उनलाई मन्त्रालय तान्ने योजनाबाट मन्त्रालय पछि हटेको छ ।
डा शेरबहादुर पुनले निकालेको विज्ञप्ति ।
सुशासनका विषयमा लेखिरहने कान्तिपुरकर्मीले बताएअनुसार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका निकटस्थ एक पदाधिकारीले शनिबार उनीसित कुरा गर्दै पुनलाई अब ठेगान लगाइने बताएका थिए । ‘नवौं तहको उपसचिव, त्यो पनि करारकोलाई हामीले चिठी काट्न नहुने ?’ ती पदाधिकारीले भनेका थिए, ‘ऊ हिरो हुनुपर्ने, के हामीले चाहि तास खेलेर दिन बिताइरहेको हो ?’
पत्र सही नियतले काटिएको थिएन भन्ने पुष्टि गर्ने यस्ता आधारहरू छन्, जसलाई डा. पुनसमेतले खन्डन गरेनन् । उनले व्यक्त गरेका असन्तुष्टि अहिले पनि बाहिरै प्रकट छन् ।
सरकारको बचाउ गर्दै मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्की डा पुनसँग स्पष्टीकरण सोधेको कुरा गलत भएको दाबी गर्छन् । छलफलका लागि पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दा नउठाएपछि उपस्थित हुन पत्र काटेको डा कार्की बताउँछन् ।
डा पुन संक्रमण रोगका विषयमा धेरै सूचना प्रवाह गर्ने चिकित्सकमध्येमा पर्छन् । उनले कोरोना भाइरसबारे जानकारी गराएर नागरिकलाई सूचित गर्दै आएका थिए । पहिलो पटक २० पुसमा कोरोना भाइरसले नेपालमा पार्ने जोखिमबारे सूचनमूलक लेख प्रकाशित गरी सचेत गराएका थिए ।
नेपालमा कोरोना नदेखिएको अवस्थामा पनि यसबारे तयारी गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो ।
डा पुन आफूले अध्ययन र अनुसन्धानका प्राविधिक कुरा मात्रै मिडियासँग बोल्ने गरेको बताएका थिए । उनले भने, “रोगबारे बोलेको हो, सरकारविरुद्धमा बोलेको थिइन ।”
बैशाख ५ मा अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा खटिएको बेलामा फोन उठाउन नभ्याउँदा पत्र नै काटेर मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । पटक–पटक फोन गरि कोभिड–१९ को बारेमा धेरै नबोल्न भनि दवाब दिँदै आएको कुरा उनले मिडियालाई बताउदै आएका थिए ।
सरुवा रोगका डाक्टर पुनलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउने समयमा यस्तो विषम् परिस्थितिमा मन्त्रालयमा तानिएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भएपछि आफ्नो कदमबाट पछि हटेको स्रोतको दावी छ ।
मन्त्रालयले भने अस्पतालको काममा बाधा नपुग्ने गरी कोरोना भाइरस बिरुद्धको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । बैशाख ७ मा मन्त्रालयमा उपस्थित भएका डाक्टर पुनले मन्त्रालयले आइतबार मिडियामा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको र घटनाक्रमलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिएको स्पष्टिकरण दिए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा बिरामी जाँच्दै डा.पुन । कल्पना भट्टराई
बैशाख ५ मा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्नकालागि मन्त्रालयमा बोलाएको भनी प्रतिक्रिया दिएका डाक्टर पुनले मिडिया दवाव पछि सञ्चारमाध्यममा आएको कुरा सत्य नभएको भनी विज्ञप्तीमा लेखेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अस्पतालका र समकक्षी केही चिकित्सको उक्साहटमा डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताइएको छ ।
डा पुन भन्छन्,“छलफलका लागि बोलाएको भनी निर्देशकलाई भनेको भए पनि हुन्थ्यो,तारन्तार फोन गरि तनाव दिनुपर्ने अवस्था थिएन ।” तर,पनि बोलाएको बेला मन्त्रालय आएर कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा सघाउ पुर्‍याउने उनी बताउँछन् ।
डा पुनलाई कोरोनाको बिषयमा छलफल गर्नका लागि मन्त्रालय बोलाइने भनेर पटक–पटक फोन र पत्र पठाएको मन्त्रालयले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि गठन भएका विज्ञहरूको समितिमा उनलाई राखिएको छैन ।
बिरामीको चाप भएको अस्पतालमा डियुटीमा खटिएका बेला डाक्टर पुनलाई पटक–पटक फोन सम्पर्क र पत्र काटेर मन्त्रालयमा उपस्थित हुन स्वाथ्य मन्त्रीले ठाडो आदेश दिनुपर्ने अवस्था तत्काल नभएको चिकित्सक बताउछन् ।
मिडियामा डा पुनको ‘कभरेज’ बढी हुन थालेपछि उनलाई हटाएर अस्पतालले डा अनुप बाँस्तोलालाई प्रवक्ता तोकेको थियो । टेकु अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा वासुदेव पाण्डे उनी मिडियामा छाएकामा असन्तुष्ट थिए । त्यसै कारण डा पाण्डेले गत मंसिरमै उनलाई कारबाहीको तयारी गरेका थिए ।
हाल इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रहेका डा पाण्डेले एक कार्यक्रममा डा पुनलाई धेरै बोल्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । डा पुनप्रति संकेत गर्दै तीन साताअघि स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले मन्त्रालयको भिडियो सम्मेलनमा सबै प्रवक्ता बन्न आवश्यक नभएको बताएका थिए । उनको यो भनाइ डा पुनप्रति लक्षित थियो ।